Kiniinii bicuu, warraaqsa diinagdeef ka'uumsa taate - BBC News Afaan Oromoo
Kiniinii bicuu, warraaqsa diinagdeef ka'uumsa taate
Jaarraawwan hedduuf jaalalleewwan dahumsa karoorfachuuf wantoota garagaraa yaalaniiru. Garuu sababii adda addaatiin hin milkoofneef.
Rogeettii karoora maatii kan taate Maargaareet Saangar saayintistoonni mala dubartoonni ittiin dahumsa karoorfatan akka hojjataniif gaafatte.
Garuu kalaqamuun kiniina kanaas warraaqsa hawaasummaa qofa hin turre. Warraaqsa dinagdee jaarraa 20ffaa keessatti olaanaa ta'an keessaa isa tokko fide malee.
Warri Masirii durii faltii naachaa fayyadamaa turan. Aristootiil ammoo zayita gaattiraa fayyadamaa jedhee ture.
Jabana keessa jirrutti filannoowwan kiniina karoora maatii bakka bu'an keessaa tokko kan ta'e kondoomiin-rakkoo mataasaa qaba.
Goodayyaa suuraa Maargaareet Saangar wiirtuu karoora maatii isa jalqabaa Niw Yoorkitti ALA bara 1916 bante
Sababni isaas, namoonni akkaataa barbaadameen waan hin fayyadamneef.
Kiniiniin liqimfamu garuu gama kanaan kondoomii caalaa harka sadi bu'aa qabeessa dha.
Kondoomiitti fayyadamuuf waliigalteen hiriyootaa ykn abbaa warraa fi haadha warraa barbaachisaa dha. Haa ta'u malee, kiniinii fayyadamuuf murteen kan dubartii qofadha. Dabalataanis, dhoksaattis fayyadamuu ni dandeessi.
Warraaqsi guddoon gama kanaan kan dhufe erga dubartoonni hin heerumiin carraa kiniinii argachu argataniin booda. Kunis kan ta'e, waggoota kudhaniin booda ALA bara 1970tti. Godinaaleen Ameerikaa hedduun haala dubartoonni hin heerumiin kiniinii itti argatan mijeessaniifiiru.
Yunivarsiitiiwwanis wiirtuulee karoora maatii saaqan. Waggoota shaniin boodas, Ameerikaatti kiniiniin kun maloota dahumsa to'annaaf oolan keessaa shamarran waggaa 18 fi 19 ta'aniif irra caalaatti filatamaa ta'e.
Goodayyaa suuraa Dhaabbanni Pilaand Paarentihuud jedhamu Ameerikaatti odeeffannoofi kiniinaa raabsa ture
Gaafa sana egaa warraaqsi dinagdee inni guddaan kan eegale.
Dubartoonni Ameerikaa keessaa gosoota barnootaa kanneen akka seeraa, fayyaa fi wal'aansa ilkaanii barachuu eegalan. Gosoonni barnootaa kunneen baay'inaan warra dhiiraa qofatu barata ture.
Lakkoofsi dubartoota dirreewwan fayyaa fi seeraa baratanii fi hojjetan hedduu dabalaa adeeme.
Kiniinii kana waliin maaltu walitti fideree? jechuun keessan hin oolu ta'a. Dubartoonni yeroo itti dahanii fi dhiisan karoorfachuu eegalan - kana jechuun ammoo hojiisaanii irratti akka dhimmaman isaan taasise.
Goodayyaa suuraa Eebbifamtoonni Yuniivarsiitii Harvaard kunneen dahumsaan dura barnoota isaanii itti fufuu danda'aniiru
Kiniinii kanaan dura, dubartiin tokko firii barnootaashee dhamdhamuuf, hanga waggaa 30 guuttutti dhala dhaabuu qabdi.
Walbira qabuuf: dubartiin yeroo yeroon wal-qunnamtii saalaa raawwattu, doktora yookaan haadha seeraa ta'uunii fi iddoo lafti kirkirutti warshaa ijaaruun wal fakkaata. Dogoggora amma huubaa geessuun dhamaatiin kun hundi lafa lixa waan ta'eef.
Heeruma takka Tursisuu
Dubartoonni wal-qunnamtii saalaarraa of qusachuun barnootasaanii galmaan ga'achuu danda'u. Haa ta'u malee baayyeen isaanii kana hin barbaanne.
Kun ammoo gammachuu qofaaf hinturre. Abbaa manaas argachuu qabu. Kiniinii kanaan dura, dubartoonni umurii xinnaatti heerumu turan. Dubartiin hojiirratti xiyyeeffachuuf walqunnamtii saalaarraa ofqusachuun hanga waggaa 30tti eegdee, sanaan booda heruma barbaaddu tokko, umuriin shee achi siqeera waan ta'eef abbaa manaa isheef ta'u argachuuf ni rakkatti.
Dhufaatiin kiniinii kanaa yaada kanas jijjiireera. Kana jechuunis, shamarreen hin heerumiin tokko siqiqii ulfaa'uu tokko malee walqunnamtii saalaa gochu dandeessi.
Dabalataanis, kiniinichi haala waliigalaa herumaa geeddareera. Warreen kiniinii hin fayyadamin dabalatee, namoonni baayyeen dafanii heerumu dhiisan,
Goodayyaa suuraa ALA bara 1973tti ulfa baasuun seera qabeessa tahe
Ijoolleenis filannoo dubartotaan gara boodaarra dhalachu jalqaban. Kan jechuunis, dubartoonni yoo xinnaate ogummaa gaarii jalqabuuf yeroo argatu.
Warri waa'ee dinagdee qoratan yunivarsiitii Harvaard keessaa Kilaawudiyaa Goldiinii fi Loorens Kaaz jedhaman, qorannoo taasisaniin - dhufaatiin kiniinii karoora maatii kanaa dubartoonni gaa'elaa fi dahumsa isaanii akka tursaniif gargaareera jedhu. Kunis hojii saanii irratti akka xiyyeeffataniif gargaareera.
Waggoota muraasa duras, qorattuun dinagdee Amaaliyaa Miilar akka ibsitetti, shamarreen waggoota digdamman keessa jirtu tokko dahumsashee waggaa tokkoon achi harkisti taanaan, galii bara jireenya ishee keessa argattu harka kudhaniin dabalti.
Kiniinii bicuun kun ammas dinagdee addunyaa jijjiiruushee itti fufteetti.